Mareykanka Oo Uga Digey Turkiga Inay Gantaalo Ka Iibsadaan Ruushka – somalilandtoday.com
Mareykanka Oo Uga Digey Turkiga Inay Gantaalo Ka Iibsadaan Ruushka
(SLT-Ankara)-Dowladda Turkiga ayaa wakhti kama dambays ah loo qabtay inay kala doorto inay iibsanayso diyaradaha ee Mareykanka ama gantaalada lidka diyaaradaha oo ay Ruushka ka iibsanayso.
BRUSSELS, BELGIUM – JULY 11: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and U.S. President Donald Trump (L) speak to each other during the 2018 NATO Summit at NATO headquarters on July 11, 2018 in Brussels, Belgium. Kayhan Ozer / Anadolu Agency
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Turkiga ugu dambayn ay arrintan go’aan ka gaadhaan dabayaaqada bisha July.
Muxay tahay cawaaqib xumada ay Turkiga wajihi karaan?
“Turkiga ma heli doonaan diyaaradaha F-35 haddii ay keensadaan gantaalada nooca S-400,” ayuu warqadiisa ku yiri. “Waxaad wali haysataan khiyaar aad ku badali kartaan qorshihiina gantaalada S-400.”ayuu intaa ku daray